Isikhathi esining impela, abasebenzisi ibhekene nephutha ukuthi ubuqiniso inethiwekhi ayitholakali okwamanje. Umsuka kuleli cala - umholi esingenakuqhathaniswa. Kuyinto isicelo ngokuvamile kubangela abasebenzisi ukucabanga mayelana ikhambi lenkinga. Ngenhlanhla, kanye uvalo akudingekile, ngoba imbangela iphutha kwanela. Akubona bonke babo ayingozi noma uphelelwe ithemba. ukwehluleka Iningi iqedwe ngokuzimela futhi ngaphandle kwezinkinga. Kungani ukugunyazwa inethiwekhi ayitholakali okwamanje?
Umsuka: ukufakwa okungafanele
Isizathu sokuqala - akusiwona Uhlelo ngempela lesifanele ukufakwa. Kulokhu, iphutha livela cishe ngokushesha: Network ukuqinisekiswa ayitholakali okwamanje. Umsuka (application) ayikuvumeli ngemvume uma uqala ukuxhuma ohlelweni.
Imangele awubalulekile panicking kakhulu. Ukulungisa isimo kuzosusa ngokuphelele uhlelo kanye, yebo, ukufakwa kwalo okwalandela. Kuhle futhi kuyancomeka le nkathi ukuze uvale zonke izinhlelo yangemuva, kanye amagciwane futhi izinhlelo zokuvikela, kungenjalo iphutha kungenzeka futhi. Ukulungele?
Khona-ke wena ugijima Umbuso indawo ukubheka umphumela. Endabeni ka ukufakwa okungalungile kokuqukethwe ungasaboni wesabe umlayezo ukuthi ubuqiniso inethiwekhi ayitholakali okwamanje. Umsuka emva ufaka, njengoba umkhuba imibukiso, abanye asebenza kahle.
Qhubekela phambili. Akukhona njalo uhlelo ngokwayo yaleli noma ukuthi iphutha. Ngezinye izikhathi futhi kwenzeka ukuthi uhlelo lokusebenza mbangela eyinhloko yenkinga. Uxhumano ukuqinisekiswa ayitholakali okwamanje (Umsuka)? Okufanele ukwenze kuleli cala?
Ungazama ukuvala uhlelo bese uqala kabusha ke, ngisho kangcono ukuze uvale bese uvula i-computer futhi. In an icala ngokwedlulele, iqalise "umshini" wakho - indlela ephumelela kakhulu ukubhekana eziningi amaphutha isicelo. Uma "kuyimpande yakho konke okubi" kwaba ukuhluleka uhlelo, uzoshabalala. Futhi ungakwazi ukuqhubeka ukusebenza kohlelo force okugcwele.
Yini enye eningayenza ukuphakamisa uma ubona isaziso: Network ukuqinisekiswa ayitholakali okwamanje (Umsuka)? Indlela yokulungisa isimo? Konke kuncike lapho iphutha isiqala ukukuhlupha. Uma ngokushesha emva kokufakwa noma ukusetshenziswa esifushane, kungaba omunye namanje iphendukele iqhinga.
Ngokwesibonelo, thola ekhethekile ifayela origin.bat. Ngezinye izikhathi kumane nje alitholakali noma ngaphandle kwesizathu ngeke ibhaliswe yesistimu yokusebenza. Ngakho-ke, isicelo kuthola inkinga. Download it, ke ukusebenzisa. Lokhu kumele kwenziwe nge amalungelo nomqondisi.
Ngokuvamile, le ndlela kuyasiza. Futhi ngeke usakwazi ukuboniswa esikrinini umlayezo ukuthi ubuqiniso inethiwekhi ayitholakali okwamanje (Umsuka). Noma kunjalo, akukho intuthuko? Iphutha livela kuze kube manje? Nokho, akufanele athukuthele. Kunalokho, ungase ucabange, yini ezinye izizathu ezikhona.
Ngezinye izikhathi, izinkinga nge-Inthanethi , zingaba imbangela yokwehluleka ukusebenza izicelo ezithile, Umsuka kusebenza lapha. Uma iphutha kwenzeka, othi ukuqinisekiswa inethiwekhi ayitholakali okwamanje (Umsuka), ngaphambi kokuqala zonke izenzo nemicabango Inthanethi, hlola operation.
Mhlawumbe inethiwekhi ulahlekile noma banyamalala imizuzwana embalwa ngesikhathi uxhumano hlelo? Noma akusebenzanga World Wide Web? Fight kanye iphutha kulokhu akusebenzi, musa nje ukulinda ukubuyiselwa ukusebenza inthanethi.
Sicela uqaphele, uma ivuliwe ngesikhathi esifanayo izinhlelo eziningi kakhulu zidinga inethiwekhi, lingaholela yephutha. Ngeshwa, uvale konke kungenzeka ukunciphisa lonke sektr egijima ngezidingo, ukusebenza kwi-Inthanethi. Futhi reception ngempumelelo kakhulu. Uma iphutha kule Umsuka asiphindi ngemva ukukhubaza ezinye izinhlelo zokusebenza ezithile nje musa kusebenze isofthiwe ngesikhathi esifanayo.
Kodwa lokhu akulona ukuphela. Uma uthola umyalezo wokuthi ukuqinisekiswa inethiwekhi ayitholakali okwamanje (Umsuka), i-Windows 8 noma 10 ungafihla imbangela. Lezi nhlelo zokusebenzisa uhlangabezana nobunzima ekusebenzeni kwe ezinye izinhlelo zokusebenza. Umsuka ungomunye wabo.
Into ukungavumelani banal amasistimu nokuqukethwe. Lokhu akwenzeki njalo, kodwa endaweni ukuba. Ungazama ukusebenzisa Umsuka ngokusebenzisa amasethingi kwedivayisi kusukela umlawuli, kodwa ikakhulukazi Ngethemba ukuthi akudingekile. Ngo-Windows 8, le ndlela Ungakwazi namanje ukusiza, kodwa "inqwaba" Origin okwamanje engahambelani. Futhi ngakho kukhona okukhiphayo ezimbili.
Eyokuqala - zokuchithwa lolu hlelo lokusebenza isimiso. Lokhu kuyokwenza ugcine eziningi ikhanda. Esesibili - ushintsho yesistimu yokusebenza kulowo ngokuvamile usebenza nge Umsuka. Le ndlela elisetshenziswe kaningi abasebenzisi.
Amagciwane kanye ebhukwini
Ngakho sayithola yezizathu zokugcina ukuthi zingakwazi ukukhiqiza umlayezo ukuthi ubuqiniso inethiwekhi ayitholakali okwamanje (Umsuka). Lezi zihlanganisa ukutheleleka nge-computer ezonakele, kanye "cluttering" ebhukwini yekhompyutha yakho.
Njengoba nje okokuqala ubhekene nale nkinga, futhi ukuba ngakususi konke ukwehluleka uhlelo futhi wachitha okuqukethwe faka OS ukuskena spyware nama-virus. Yelapha zonke nobungozi, kodwa lokho ngeke welaphe, kumelwe kususwe unomphela. Emisha imizamo ukusebenza Umsuka.
Akusizi? Khona ungazama ukuhlanza ebhukwini. Kungcono ukukwenza ngokuzenzakalelayo. Lokhu kuzosiza CCleaner. Chitha ukuhlaziywa computer, bese ucindezela u- "Ukuhlanza". Registry ahlanzekile. Kungcono ukuqala kabusha uhlelo ngaphambi baqhubeka imizamo ukusebenza Umsuka.
Lapha sibheka zonke izindlela ezingakhona lapho ngaleso Umsuka liyavela kokugunyazwa engenakwenzeka. Ungase uphawule ukuthi eziningi kubo. Ukubikezela kwenzakaleni, ngeke. Kungcono ukuzama lonke uhlu ezihlongozwayo ukubhekana inkinga noma iyiphi lokhu kuyokusiza ukuba uqiniseke.
US zokuxhumana. International yokuxhumana. Facebook - inethiwekhi yomphakathi wamazwe omhlaba
Indlela ukungena "Facebook": yini okudingeka uyenze
Ukuze uqonde lo mbuzo: "Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe ukuxhuma amakhompyutha ezimbili inethiwekhi yendawo?"
Indlela yokubhekana yangasese albhamu "VKontakte": Izimfihlo esenzweni
Siyaqonda ukuthi ukungena "Thintana nathi" ekhasini lakho
Indlela yokulinganisa ukushisa kwenja: izindlela nezinguqulo zezinsimbi
Ukulimaza phambi kwamehlo balahle.
Kuyini GTA 4 iphutha ezibucayi?
Ngaphonsa intombazane ukuthi benzeni kulesi simo?
Mausoleum of Halicarnassus: umlando ukwakhiwa kanye izakhiwo
I-Rmb Inkampani: iSlovenia ingacela usizo
Ikhaya ukupheka: kungenzeka ukwenza kusuka amasi
I-Klapp - izimonyo zaseJalimane: ukubuyekezwa. Izimonyo zezisebenzi zaseJalimane
IL-49 (sokuzingela): izici, izithombe
Potato croquettes nge sauce: okungcono zokupheka